Xildhibaanada Maamulka KGS: “Shariif Xasan wuu Marinhabaabiyey Shuruucdii Maamulka, waxa uuna Samaystay Xeerar Isaga u Gaar ah” (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 16, 2017 7:06 g 0
Ugu yaraan 45 xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta saxiixay mooshin kadhan ah Madaxweyne Shariif Xasan Shiikh Aadan .
Xildhibaan Axmed Maxamed Cali oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Shariif Xassan Sheikh Aadan in uu marinhabaabiyay shuruucdii Maamulka Koofur Galbeed, islamarkaana uu sameystay xeerar isaga u gaar ah.
Xildhibaanada ayaa sheegay in madaxweynaha uu ugu hanjabay in aysan xilka ka qaadi karin madaama uu sheegay in ay ergo soo dooratay, waxa ayna sheegeen in ay ka dhabayn doonaan xilka qaadista madaxwenaha.
Qaar kamid aha xildhibaanada Baarlamaanka soomaaliya oo ka soo jeeda maamulkaasi ayaa taageersan mooshinka xildhibaanada Dowladda Koonfur Galbeed.
Xildhibaan Axmed Maxamed Cali waxa uu u waramay wariye Xasan Heykal, Daljir Bossaso.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 501 Wararka 25996